Socdaalkaygii Soomaaliya 2008
Soomaaliya iyo waxbarashada
Sida aan la socono Soomaaliya waa dal dunida saddexaad ka mid ah oo ay ku nool yihiin dad badan oo cidina aanay ogayn tiradooda, lagayaabee inay ku noolyihiin 30 million oo qof. Dib-u-dhac iyo burbur wayn ayaa ka soo gaadhay sannadihii dagaalada sokeeye ay socdeen intii ay dawladu jirtay iyo waqtiyo badan oo ka danbeeyey. 18kii sano ee ugu danbeeyey wuxuu ahaa dalka aanay ka jirin wax nadaam dawladeed ah, sidaa awgeed duruufihii jiray awgood waxay dadku u jihaysteen inay isu xukumaan qaab qabaa’il. Wixii waqtigaa ka danbeeyey meelaha qaarkood waxaa dalka ka samaysmay maamulo ku dhisan hab qabiil, kuwaas oo duruufaha ku xeeran awgood dad badan ay u arkaan kuwo aan wax horumar ah samayn karin. Sannadkii 2004 waxaa dalka Kenya lagu dhisay dawlad ku meel gaadh ah oo taageero ka haysata beesha caalamka, laakiin wax faa’iido ah lagama gaadhin. Hadaba marka laga hadlayo dhibaatooyinka caalamka Soomaaliya waa tusaale wax-ku-ool ah, waayo waxay weli ku jirtaa fawdo, colaado iyo dhibaatooyin dabiici ah oo iska soo daba noqday, kuwaas oo sababay dhimasho badan iyo kumanyaal dad ah oo ku barakacay dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxaa burburay nadaamkii dawladnimo iyo asaaskii dhaqaale, sidaa awgeed waxaa soo gaadhay khasaare ballaadhan oo dhinac kasta leh, hadaba waxbarashadu waxay ka mid tahay meelaha burburkaasu sida wayn u saameeyey, saddex fac oo da’yartii dalka ahayd ayaan nasiib u yeelan daryeel, waxbarasho, shaqo iyo door hogaamineed midnaba.
Waxbarashada da’yarta Soomaaliyeed
1991 markii ay burburtay dawladii dhexe ee Soomaaliya, waxaa sidoo kale gebi ahaanba burburay nadaamkii waxbarasho ee dalka jiray. Waxaa meesha ka baxay maskaxdii aqooneed, hay’adihii kala duwanaa, maamulkii iyo manaahijtii waxbarashada. Halista arintaasu waxay si wayn u saamaysay guud ahaan da’yartii soomaaliyeed, waayo waxaa la waayey aqoontii iyo hay’adihii waxbarashada hogaanka u ahaa. Waxaa burburay asaaskii oo ay ka mid ahaayeen goobihii waxbarashada, sidaa awgeed waxbarashadu waxay waqtigaa hoos u goysay masaafo wayn, hadaba si loo daboolo kaalinta ay banaysay dawladii burburtay, marxaladaa adag ee la soo maray waxaa hanaqaaday waxbarashada gaarka ah oo arintaa ka muujisay firfircooni wayn.
Doorka waxbarashada gaarka ah
Waxbarashada gaarka ah inkastoo markeedii hore ay ku jirtay kaalin muhiim ah wixii ka horeeyey 1991, hadana waxaa jiray dhibaatooyin aan la koobi karin oo ay ka mid ahaayeen isku xidhnaan iyo wadashaqayn la’aan, asaas midaysan iyo urursanaan la’aan. Si loo mideeyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyo in kor loo qaado tayada waxbarasho waxaa abuurmay dallado kala duwan. Dalladahaas qaarkood waxay hoos tagaan maamulo ka jira meelaha ay ka shaqeeyaan, kuwo kalana waxay ku shaqeeyaan meelo wax maamul ah aanay ka jirin. Kala faquuqa siyaasadeed ee dalka ka jira waxaa hay’adaha waxbarashada ka haysta dhibaatooyin raad wayn ku yeelan kara dhinacyada isku xidhka umadeed, waxqabadka iyo horumarka. Waxaa meelaha qaar weli ka muuqda faquuq ku salaysan dagaaladii sokeeyo iyo afkaaro siyaasadeed oo horumarka aanay dani ugu jirin. Sida muuqata waa arimo bulshada ka dhex abuuri kara niyad xumo, kala fogaansho, deganaansho la’aan iyo dib-u-dhac guud. Waxaa la odhan karaa waa arimo caqabad ku ah kobcinta aqoonta, waxqabadka iyo horumarka, waayo waxbarashada Soomaaliya waxaa hogaanka u haya ururo madani ah oo leh heerar kala duwan. Waxaa meelaha qaar ka jira isku xidhnaan la’aan ka dhaxaysa xataa kuwo hal gobol ka wada shaqeeya. Waxaa jira dhibaatooyin xaga manaahijta ah, arimo nabadgelyo xumo, macalin la’aan, tix raac la’aan xaga buugta u badan, hubin la’aan iwm.
Sida badan waxbarashadu guud ahaan Soomaaliya waxay ku socotaa luuqadaha carabiga soomaaliga iyo ingiriisida, waana luuqadaha soomaalidu guud ahaan ay iskula xidhiidho.
Waxaa jira saddex nooc dhaqaale oo guud ahaan waxbarashadu ku socoto, kuwaas oo kala ah doorka waalidka, hay’adaha samafalka iyo doorka maamulo ka jira qaybo dalka ka mid ah. Hadaba waxqabadkoodu wuxuu u kala baxaa sidan:
Si loo buuxiyo baahida waxbarasho wuxuu waalidku ku qasban yahay sidii ilmihiisa uu ugu heli lahaa waxbarasho, sidaa awgeed dhismayaasha, qalabaynta, baahida macalinka iyo adeegyada muhiimka ah, marxalada hadda lagu jiraa waa mid waalidka ku waajibinaysa inuu kafaalo qaado, sidaa awgeed waxaa la odhan karaa waalidku waa maalgeliyaha koowaad ee waxbarshada, hadaba waxaa haboon in laga shaqeeyo kobcinta dhaqaalaha iyo wacyiga qoyska.
Doorka hay’adaha, khaasatan kuwa UNka waxqabadkooda waxaa lagu tilmaamaa mid qaali ah, hadana waxsoosaarkiisu uu kooban yahay. Inta badan hay’adaha UNka iyo NGO-yada qaarkood waxaa xidhiidhkoodu soo maraa gacmo kala duwan oo qaarkood aanay masuuliyadi ka saarnayn xaga waxbarashada. Waxaa meel kasta lagu arki kara waxyaalo ay ku qoran yihiin magacyada hay’adaha, khaasatan kuwa UNka, dushana ay kaga qoran tahay lama iibin karo, sidaas oo ay tahay hadana waxay ka mid yihiin badeecdaha caadiga ah ee maalin kasta suuqyada lagu kala iibsado. Arimahaas iyo kuwo kale oo badan waxay dadku ku macneeyeen musuqmaasuq baahay iyo iyadoo inta badan hay’aduhu xamuulkooda ku faaruqiyaan meelo aan munaasib ahayn.
Meelaha ay ka jiraan maamuladu, miisaaniyadaha waxbarashada ay u qoondeeyaan waa mid kooban oo la odhan karo waa wax afka baarkiisa uun ah. Maamulka Somaliland ayaa sannadkii 2007 wuxuu waxbarashada uga qoondeeyey miisaaniyadii sannadka 8%, halka difaaca iyo sirdoonka loo qoondeeyey 58.27%, maamulka Puntland ayaa isaguna wuxuu waxbarashada u qoondeeyaa wax ka yar 1% miisaaniyada sannadkii, DFK ayaan la odhan karaa iyadu maba leh qorshe iyo miisaaniyad waxbarasho, balse intii ay dalka timi waxaa xidhmay goobo badan oo waxbarasho. Sida la xaqiijiyey miisaaniyadaha ay maamuladu u qoondeeyaan waxbarashadu waa kuwo inta badan ku baxa ilaalinta iyo qarashaadka madaxda maamulada ee ka qayb gala shirarka ururada waxbarashada iyo arimo kale oo la xidhiidha sidii loo abuuri lahaa sababo lagu hoos tegi karo.
Wadashaqaynta daladaha waxbarashada
Lama garan karo tirada qaxootiga ee dhex wareegaalaysa dalalka bariga Afrika oo ah dalal ay la degeen musuqmaasuq, maamul xumo is maandhaaf siyaasadeed iyo dagaalo. Hadaba Soomaaliya oo ah dal ay dhibaatooyinkaasu si wayn u saameeyeen waxaa ka jira dib-u-dhac aad u wayn ka soo gaadhay dagaalo iska soo daba noqday, dawlad la’aan, maamul xumo baahsan iyo dhibaatooyin dabiici ah. Waxaa dalka gudihiisa ku baracsan dad aad u badan oo gaadhaya malaayiin, kuwaas oo ka kala yimi Soomaaliya, Ethipooia, Kenya, Tanzaniya, Badhtamaha iyo dalalka kale ee Bariga Afrika. Waxaa jirta caruur badan oo siyaabo kala duwan aan fursad u heli karin waxbarasho iyo daryeel wanaagsan. Isku xidhnaan la’aan iyo arimo badan oo la xidhiidha nabadgelyada iyo kalsooni la’aan jirta, waxaa la odhan karaa ma jirto qiyaas la isku halayn karo oo sheegi karta tirada guud ahaan ardada maalin kasta waxbarashada u xaadirta, sidoo kale tayada waxbarashadu ma aha mid gaadhsiisan heerkii la rabay sababo badan oo jira awgood.
Dalladda Waxbarashada PEN
Hadaba innaga oo eegayna warbixinta aynu kor kaga soo hadalay iyo duruurfaha kala duwan ee ku xeeran waxbarashada da’yarta waxaanu waraysi la yeelanay gudoomiyaha dalladda waxbarashada ee Pen Dr. Maxamed Cali Faarax. Dr. Maxamed Cali wuxuu noo sheegay “...in burburkii ka dib 1992dii ay waxbarashada ka soo bilaabeen meel eber ah oo aanay ka jirin dhismayaal, xidhiidh, dhaqaale, macallimiin, agab waxbarasho iyo asaaska kale toona. Hadaba dalladda PEN oo la asaasay sannadkii 2005 waxay ka shaqaysaa kor-u-qaadista niyada, ururinta, manahijta, tababarka, heerka waxbarashada iyo xidhiidhka bahda waxbarashada. Waxaa dalladda hoos yimaada 89 dugsi waxbarasho, kuwaas oo ay kala shaqayso dhinacyada maamulka, isku xidhka, manaahijta, tababarka macallinka, waqtiga shaqada (sida waqtiga, maadooyinka iyo fasaxyada), bedelka ardayga, shahaadada, dhinaca dhismayaasha, caafimaadka (sanitation) iyo agabka waxarashada iwm...”
Dr. Maxamed Cali Faarax, waa madaxa dallada waxbarashada
(Private Education Network PEN), sidoo kale waa madaxa
hay’ada Muslim Aid ee gobolada la magac baxay Puntland.
Sawirka Bosaso, Soomaaliya, 2008.
“Iskuulada intooda badan waxaa dhista bulshada deegaanka, sidaa awgeed waxaa jira kuwo badan oo aan gaadh siisnayn heerkii loo baahnaa, hadaba annagu waxaanu culayska saarnaa xaga tirada si aanu fasalku 30 arday uga badan, manaahijta, qalabka wax lagu baranayo, heerka, samaynta xidhiidhka (network) guud ama gaarka ah iyo tababarka, laakiin waxaa maqan dawrkii dawladeed oo dhan sida dhaqaalihii, xidhiidhkii (logitikada iyo shirarka), manhajkii iyo dejinta heer waxbarasho, tusaale hadaynu soo qaadano dalka Malaysia Mahatiir Maxamed mar uu ka hadlayey muhiimada aqoonta, wuxuu sheegay in horumarka ay ku gaadheen aqoonta oo ay xooga saareen, sidaa awgeed miisaaniyada dawlada 25% waxaa loo qoondayn jiray dhinaca waxbarashada” ayuu yidhi Dr. Maxamed Cali mar uu ka hadlayey qiimaha ay leedahay aqoontu.
Doorka aqoon yahanka
“Waqtigan hadda ah aqoon-yahanka culays wayn ayaa saaran, haday ahaan lahayd dhinaca siyaasada, isku xidhka, dhaqaalaha iyo hogaaminta ummadda. Waxaa dhici karta khilaafku inuu sii baahi karo, waayo dantii gaarka ahayd ayaa dhibaato ka jirtaa, aqoon yahankii waqtigan waa mid legdan, dadka masraxa ka muuqdaana waxay u badan yihiin dad dantooda oo keliya u shaqaysanaya, mana jiraan cid doonaysa inuu aqoon yahanku soo dhawaado. Dadkii aqoonta lahaa waqtigan waxay noqdeen kuwo daba taagan oday kaabe qabiil ah, doorkii waxqabadkuna wuxuu noqday mid loo doortay nin aan waajibaadka garanayn, dalkana marka la eego aqoontii dibadda ayey uga baxday, booskiina wuu banaanaaday, sidaasoo ay tahay hadana waanu dareen-sanahay arintaasu in aanay cudurdaar noqonayn, waxaase loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo gudo iyo dibadba. Waxaa waajib ah in loo hawl galo sidii dalkan dawlad loogu samayn lahaa” ayuu yidhi Dr. Maxamed Cali mar uu ka warbixinayey doorka aqoon yahanka.
Marka la eego waqtiga dheer ee dalku dawlad la’aanta ahaa, waxaa loo baahan yahay in qof walba oo Soomaali ah uu ogaado in aanay jirin cid ay isku halleeyaan, iyaga ayey waajib ku tahay inay u hawl galaan sidii ay dawlad nimadoodii ula soo noqon lahaayeen, khaasatan bahda waxbarashada meel kasta oo ay joogaan waxaa waajib ku ah inay arintaa horseed ka noqdaan. Waxaa loo baahan yahay waxsoosaar, hal abuur iyo feker dhinaca wacyiga ah sidii looga wada shaqayn lahaa isku xidhka ummadda iyo in wax la baro lana soo saaro jiilka soo socda oo la helo dad aqoon leh, arimahaasu waxay ka mid yihiin yoolka aqoon yahanku uu tiigsanayo. Wacyigelinta iyo kor-u-qaadista aqoontu waa doorka aqoon yahanka, dadaal badan ayaa jira, balse arintaa dhibaatooyin badan ayaa ku xeeran. Dadka ilaa iyo maanta siyaasada hogaaminayaa waa kuwo muddo dheer soo taagnaa, wax ay qabteena ma jirin, haday wax qabteena iyagaa dib u cunay, caalamka maalin kasta waxaa soo kordha dad cusub oo aqoontooda, fekerkooda iyo firfircoonidaada lagaga faa’iido. Ardaydii soo baxday way ooman yihiin, waxaa loo baahan yahay sidii ay isula jaan qaadi lahaayeen dadkaa badan ee waxbaranaya, waxay u baahan yihiin sidii ay u soo geli lahaayeen suuqa shaqada, hogaaka iyo ka qayb qaadashada horumarinta ummadda, ayuu yidhi Dr. Maxamed Cali isagoo ka hadlaya mustaqbalka waxa ay fili karaan.
Mar aanu wax ka waydiinay Dr. Maxamed xidhiidhka ay la leeyihiin dalladaha kale ee dalka ka jira, wuxuu yidhi: “siyaasada ayey noogu jirtaa in aanu xidhiidh la samayno dalladdaha kale ee waxbarshada, waxaanu arintaa ka soo bilownay inaanu isku xidhno goobaha waxbarashada, ugana gudubno sidii aanu isugu xidhi lahayn dalladaha, waxaaanu kale oo samaynaa tababaro arimahaa ku saabsan, waxaa kale oo hadda aanu xidhiidh la leenahay dalladda African Education Trust (AET) oo ah dallad midaysa dugsiyada sare ee goboladan iyo dalladda FPEN oo ka jirta Muqdisho, sidoo kale waxaanu ku-han-waynahay sidii aanu ula xidhiidhi lahayn dalladaha kale ee dalka ka jira. Waxaa kale oo aanu ku talo jirnaa in dalladda loo sameeyo xarun cilmi baadhis (resources centre), arintaasina waa mid aanu u soo jeedinayno in ay nagala qayb qaataan aqoon yahanka debada iyo guduhuba”.
Su’aal kale oo ahayd “baahida macallinka iyo adeegyada muhiimka ah sidee loo daboolaa...”, wuxuu ku yidhi Dr. Maxamed Cali: Anagu ma nihin hay’ad wayn oo dhaqaale haysata, waxaanu nahay dallad ay iskuuladu ku midoobeen oo ka shaqaysa isku xidhkooda, socodsiinta shaqada, talabixinta, raadinta qalabka loo baahan yahay iyo wixii la mid ah, sidaa awgeed sidii aan horay u soo sheegnay waxbarashada oo dhan waxay ku socotaa doorka waalidka iyo bulshada. Lacagta yar ee laga qaado ardayga (qalin darka) ayaa baahiyaha oo dhan laga daboolaa, waxaase jirta dhibaato iskuulada oo dhan haysata, meel kastana ka jirta oo ah in macalinku aanu mushaar helin waqtiga fasaxa ah, iyadoo ay macalinkii la xidhiidhaan mas’uuliyado qoys, taasina waxay dhiiri gelisaa inuu waqtiga fasaxa shaqo taga oo wax kale raadsado. Markaa macalinkii aad soo tababartay waxaa laga yaabaa, marka fasaxa laga soo noqdo, inuu sooba noqon waayo oo uu helo shaqo kale ama duruufuhu ay meel kale kala dhacaan, arintaasi waa mid culays wayn uu ka taagan yahay una baahan in wax laga qabto, waayo markasta macalimiintii isbedel ayaa ku imanaya, waxaa dhacaysa macalin la’aan, waxaad ku qasban tahay inaad macalin kale raadiso, arintaasina dhibaatadeeda ayey leedahay.
Pen iyo doorka waxbarashada qaxootiga
Sida aan la socono Boosaso waxaa jooga dad badan oo qaxooti ah, hadaba mar hadii aad tihiin dallad wayn oo waxbarasho waajib ma iska saartaan waxbarashada dadkaas, khaasatan da’yarta, ma jirtaa wax xidhiidh ama talo oo arintaa la idin kala yeesho? Ayaanu waydiinay Dr. Maxamed Cali, isaga oo ka hadlaya arintaana wuxuu yidhi:
Dadkaa dhibaatooyin badan baa haysta oo ay ka mid yihiin deegaan xumo, nadaafad iyo daryeelka la’aan, waxaana jiray hay’ado kale oo ka shaqaya arimahaa, laakiin annagu waxaanu isku daynaa inaanu ka hadalo xaaladooda, wixii nalooga soo baahdana u fududayno (facilitation) sida iskuulada iyo xaga qalabka wixii aanu awoodno, sidoo kale waxaa jira barnaamijyo aanu ku talo jirno oo ku saabsan in loo sahlo sidii iskuulada ay wax uga baran lahaayeen, in caruurta laga bixiyo lacagta qalin-darka (fee-ga) oo anu doonayno inaanu la kaashano hay’adaha sida Muslim Aid.
Tani waa goob loogu talo galay iskuul wax l ugu baro da’yarta qaxootiga, sida ka muuqata waxaa dhistay UNICEF, laakiin waa meel wax shaqo ah aanay waqtigan hadda ah ka socon.
Xaalada dhaqaale ee Soomaaliya:
Qiyaaso aan sugnayn oo laga sameeyey gudaha dalka, waxay sheegayaan in 50% dadka soomaaliyeed ay si uun ugu tiirsan yihiin taakulada ay ka helaan qurbojoogta, 20% waa dadka shaqeeya, laakiin xaaladoodu way ka hoosayso heerka shaqada, marka laga eego nabadgelyada, xuquuqda, qaabka shaqada iyo dakhliga. 25% waxaa lagu tilmaami karaa dad aan waxba haysan, waxayna u badan yihiin dadka xeryaha qaxootiga ku jira iyo kuwa dalka gudihiisa ku barakacsan. 5% waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dadka iska leh ganacsiga iyo ilaha waxsoosaarka kooban ee dalka ka jira, hadana dhanka kale waxaa la odhan karaa noloshu guud ahaan waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha. Soomaaliya waa dal ku haboon xoolaha nool, waxsoosaarka beeraha, kaluumaysiga iyo ganacsiga marka la eego meesha uu ku yaalo, laakin waxaa jira sababoo badan oo ragaadiyey in horumar laga sameeyo arimahaa sida aasaas iyo aqoon la’aan, dhaqaale iyo qalab xumo, qorshe iyo socodsiin la’aan, waxaa iyaguna jira hogaan xumo, amaan la’aan, faragelin iyo deganaansho la’aan. Maamulada ka jira meelo dalka ka mid ah waxay miisaaniyada ugu badan ku bixiyaan adkaysiga kursiga iyo asaraarka qabaailka, mana laha qorshe iyo miisaaliyad lagu horumarinayo dhinacayada aqoonta iyo waxsoosaarka.
Shaxda miisaanka maaliyadeed farqiga waxbarashada iyo difaaca u dhexeeya, raadka arintaasu ku leedahay, degaanhaha, koboca garaadka bulshada iyo horumarka guud waxaynu ka arki karnaa isbarbar dhiga soo socda.
Isbarbar dhiga miisaaniyadaha difaaca iyo waxbarashada 2007 ee maamulada:
Somaliya Difaaca Waxbarashada Farqiga
Somaliland 58,27% 8% 50,27%
Puntland 80% 1% 79%
DFK 100% 0% 100%
Wadarta 238,27% 9% 229,27%
Puntland iyo DFK waa qiyaasaha ugu dhaw ee la hayo.
Waalidka: maalgeliyaha aqoonta.
HDA waxay kaa codsanaysa inaad kala qayb qaadato fulinta arimaha waxbarasho ee ay ku hawlan tahay, hadaba kafaalo qaad hal canug, waana maalgashigaaga maanta waana faa’iidada berri iyo saadanbe...
Shaxda kafaala qaadka halkii canug bishiiba waa sidan hoos ku cad:
Halkii canug Daryeelka
Bishii USD 24 10 10 44
HDA meel kasta oo aad joogto waxay kugu boorinaynaa cidna ha ku halayn ubadkaaga, ka qayb qaado nabada iyo maamul wanaaga, badbaadada ubadka iyo kobcinta aqoonta.
FG.: Hadii la heli karo xarumo daryeel qarashku wuu ka yaraan karaa qiimaynta aynu kor ku soo xusnay, hadaba iskaashi bulshadu waa maskax, maal iyo muruq la isku biiriyey.
WD. Hassan Nuur
AKHRI: Xaalada Boosaaso iyo Barakacayaasha
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 1, 2009